Ngo-Ephreli 20, 1994, uMongameli wezwe (ngalesosikhathi), uFW De Klerk, umemezele ukuthi iRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika izoba nezingoma ezimbili zesizwe. Ngokufanayo, Nkosi Sikelel 'iAfrika (uNkulunkulu abusise Afrika) ne-Die Stem van Suid-Afrika (Ukubizwa kweNingizimu Afrika).
Lokhu kwakuyingxenye yezimiso zomthethosisekelo wesikhashana ka-1993, iSigaba 248 (1) neSigaba 2. Ngokwesigaba 4 soMthethosisekelo omusha waseNingizimu Afrika, esasayinwe emthethweni eSharpeville ngoDisemba 10, 1996, inguqulo efinyelelekile nehlangene yeNkosi Sikelel 'iAfrica ne-Die Stem van Suid Afrika manje ingoma yesizwe eNingizimu Afrika. Njengoba kumenyezelwe kwiGazethi kaHulumeni No. 18341, eyedlule ngo-Okthoba 10, 1997.
I-Die Stem van Suid Afrika
I-Die Stem van Suid-Afrika (Ubizo lweNingizimu Afrika) yabhalwa nguCJ Langenhoven ngoMeyi 1918, njengombongo. UMfundisi uML de Villiers, wabhala umculo ngo-1921. Ekupheleni komsakazo ngamunye, iNingizimu Afrika Yokusakaza (SABC) isetshenziselwa ukudlala kokubili uNkulunkulu ngaphandle kweNkosi ne-Die Stem.
Ukucula kokuqala komphakathi ka-Die Stem nokuphakanyiswa okusemthethweni kwefulege kazwelonke bekuyi-31 kuMeyi 1928 eKapa. Kodwa-ke, ngo-1957 ngo-Meyi wesibili, uhulumeni wamemezela ukuthi u-Die Stem wayengumculo wesizwe osemthethweni, owawunyaka owathola ilungelo lobunikazi.
Ngomnyaka ka-1959, iculo lesizwe elisemthethweni laqinisekiswa nguMthetho wePhalamende. Umbhalo wesiNgisi wengoma kazwelonke, The Call of South Africa, waba iculo ngonyaka ka-1952, lapho lamukelwe ukuba lisetshenziswe ngokomthetho.
U-Enoch Sontonga, uthisha wesikole samasonto aseMethodist, wabhala isigaba sokuqala saNkosi Nkosi Sikelel 'iAfrika njengengoma yesiXhosa ngo-1897. Kamuva ezinye iziqu eziyisikhombisa zanezelwa ngesiXhosa futhi zabhalwa yizimbongi uSamuel Mqhayi. Inguqulo yesiSuthu yeNkosi Sikelel 'iAfrika, eyanyatheliswa ngo-1942, yabhalwa nguMoses Mphahlele.
UNkosi Sikelel 'iAfrika waba iculo elidumile, ngemuva kokuhlabelelwa emakhonsathini eGoli aholwa nguMfundisi JL Dube sika-Ohlange Zulu Choir. Kamuva kwaba yingoma eyayihlabelelwa emihlanganweni yezombusazwe, njengesenzo sokungahloniphi, phakathi nonyaka wobandlululo. Ngokuvamile, isiqalo sokuqala sitholakala ngesiXhosa noma ngesiZulu futhi inguqulo yesiSuthu.
Noma kunjalo, iNkosi Sikelel 'iAfrika ayikho inguqulo ejwayelekile noma inguqulo futhi amagama ahluke ezindaweni ngezindawo futhi ngezikhathi ezithile.
Lona nguqulo olusemthethweni lwesihlabelelo sikazwelonke, ukuhlanganisa iNkosi Sikelel 'iAfrika ne-Die Stem / I-Call of South Africa, ngokuhumusha ngesiNgisi esinikezwe kubakaki:
Indlela Yokuhlonipha iNdumo kaZwelonke
I-National Anthem kufanele ilandwe ngenhlonipho efanele. Bonke kufanele bamelele ngezandla zabo ezibekwe eceleni kwabo ngenkathi behlabelela iNdumo kaZwelonke. Abezizwe kufanele bathathe amahhashi abo njengesibonakaliso senhlonipho.Translated by Nsika Khoza